Vaovao - SUNTOP Masinina fanapahana laser kely manapaka kely any Alemana
Ny milina fantsom-boasary laser vita amin'ny laser avo lenta dia natolotra soa aman-tsara tany Alemana. Ny mpanjifa dia nanolotra serivisy fanodinana vy indrindra ary mitaky ny marina 0,08mm. Tany am-piandohana dia nisafidy mpamatsy maro izy, aorian'ny fampitahana ny fikirakirana ny milina, ny marina, ny maha-matihanina ary ny serivisy an'ilay milina, dia voafantina ihany i SUNTOP LASER. Eto izahay dia mirary ny orinasany tsaratsara kokoa. SUNTOP dia hiasa mafy ary tsy handiso fanantenana anao.
Raha ny angom-baovao farany navoakan'ny General Administration an'ny ladoany dia nahatratra 2,84 trillion yuan tamin'ny volana Oktobra ny fanafarana sy ny fanondranana ivelany any Shina tamin'ny volana Oktobra, fitomboana 4,6% raha oharina amin'ny taon-dasa (io ambany io ihany). Io ihany koa ny fitomboana tsara ny sandan'ny importa ivelany sy ny sandan'ny fanondranana mandritra ny dimy volana misesy hatramin'ny volana Jona. Anisan'izany, ny fanondranana dia 1,62 trillion yuan, fiakarana 7,6%; ny import dia 1,22 trillion yuan, fiakarana 0,9%; ny ambim-barotra dia 401.75 miliara yuan, fiakarana 34,9%. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny anton-javatra tsara eto an-toerana sy any ivelany dia mbola miangona, ary ny varotra ivelany dia andrasana hitazona fironana fitomboana tsy miova mandritra ny taona.
Amin'ny ankapobeny, tao anatin'ny 10 volana voalohany tamin'ity taona ity, ny sandan'ny importa sy ny fanondranana entana any Shina dia 25,95 trillion yuan, fiakarana 1,1%. Anisan'izany, ny fanondranana dia 14,33 trillion yuan, fiakarana 2,4%; ny import dia 11,62 trillion yuan, nihena 0,5%; ny ambim-barotra dia 2,71 trillion yuan, fitomboana 16,9%.
Raha mitazona ny fitomboan'ny ambaratonga tsy miova, ny firafitry ny varotra ao Shina dia nohatsaraina bebe kokoa, miaraka amin'ny fitomboan'ny varotra sy ny fanondranana amin'ny ankapobeny ary ny fitomboan'ny fitomboana. Tao anatin'ny 10 volana voalohany, ny importa sy ny fanondranana varotra ankapobeny an'i Shina dia nahatratra 15,6 trillion yuan, fiakarana 2,8%, mitentina 60,1% ny sanda ara-barotra vahiny any Shina, fiakarana 1 isan-jato tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Anisan'izany, ny fanondranana dia nahatratra 8,51 trillion yuan, fiakarana 4,8%; ny import dia nahatratra 7,09 trillion yuan, fiakarana 0,5%. Nandritra io vanim-potoana io ihany, ny fanafarana sy ny fanondranana ny varotra fanodinana dia nahatratra 6,09 trillion yuan, nihena 6,2%.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny famerenana haingana ny fanondranana varotra ankapobeny dia manome hery ny fanatsarana ny firafitry ny varotra ankapobeny. Wang Han, lehiben'ny toekarena ao amin'ny Societe Generale Securities, dia nilaza fa hatramin'ny volana martsa, nandritra ny fanarenana ny fanondranana any Shina, ny fahefana fanarenana dia avy amin'ny fanondranana varotra ankapobeny. Ny tahan'ny fampiroboroboana ny varotra ankapobeny dia nahatratra 16,8% hatramin'ny ambany - 4,5% tamin'ny volana martsa hatramin'ny oktobra; nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Oktobra, ny tahan'ny fitomboan'ny varotra ankapobeny dia nahatratra 2,8%, mitentina eo amin'ny 60% ny fanondranana any Shina, fiakarana manodidina ny 1% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Tamin'io vanim-potoana io ihany, ny varotra fanodinana importe ampiarahina dia - 7,5% isan-taona, ary ny varotra fikirakirana ho avy dia - 14,7% isan-taona. Amin'ny dingan'ny fanarenana fanondranana aorian'ny valan'aretina, ny varotra ankapobeny manana sanda ambonimbony kokoa dia ho sitrana tsara kokoa ary hihatsara ny firafitr'i Shina.
Pipe Fiber Laser Cutter, Tube Laser Cutter, Masinina fanapahana fantsom-laser, Masinina fanapahana laser fibre China, Masinina manapaka laser, Masinina manapaka fantsom-laser,